Dagaalo Culus oo Dib Uga Qarxay Magaalada Muqdisho • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Dagaalo Culus oo Dib Uga Qarxay Magaalada Muqdisho
Dagaalo Culus oo Dib Uga Qarxay Magaalada Muqdisho
August 23, 2010 - By: Abdirahman. A
Dagaalo iyo duqeymo xoogan ayaa gelinkii danbe ee maanta waxaa ay ka qarxeen magaaladda Muqdisho,kuwaas oo la isku adeegsanaayo hubka noocyadiisa kala duwan.
Wararka ayaa sheegaaya in dagaalka uu yimid kadib markii xoogaga mucaaradka ee Al-shabaab iyo Xisbul IslaamÂ ay weerar ku qaadeen fariisimo ay iska lahaayeen ciidamada Dawladda, iyo kuwa ahlu sunnah waljaamac.
Dagaalka ayaa ka dhacay degmooyinka Hodan, Howlwadaag iyo Boondheere,waxaana qayb ka ahaa ciidanka AMISOM oo iyana duqeymo xoogan geysteen.
Madaafiic ay ku duqeyeen Suuqa Bakaaraha ayaa waxaa ku geeriyooday inka badan 6-ruux oo ku sugnaa xilligaas iyadoo dhaawaca aad u badanyahay laguna sheegay inka badan 40-ruux.
Saraakiisha Caafimaadka ayaa ku waramaaya in khasaaraha uu aad u badanyahay,waxaana dhimashada lagu sheegay inka badan 20-qof oo rayid ah oo goobo kala duwan ku geeriyooday.
Xilliga dagaaladu ay bilawdeen waxaa ay dadweynaha reer Muqdisho ay u diyaar garoobayeen afurka maadama lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan.
Afhayeenka xarakada al-shabaab ayaa maanta shir saxaafadeed uu qabtey ku dhawaaqey in ay bilaabeen dagaal uu ugu magac daray dhamaystirkii cadawga AMISOM, waxaana uu sheegay in dagaalkaasi uu yahay mid aan joogsanayn ilaa ay AMISOM dalka ka saaraan.
Dawladda Federaalka ayaa dhinaceeda ka soo saartey war saxaafadda loogu talo galay waxayna eedda dagaalka dusha ka saareen xarakada al-shabaab iyaga oo sheegay in ay dad shacab ah hoobiyaal ku dileen, ma jirto wax war ah oo ku saabsan dagaalka oo ka soo baxay xarakada marka laga reebo warsaxaafadeedkii maanta ay ku goodiyeen in ay qaadayaan dagaal ay ugu magac dareenÂ “Nihaayatul Muctadiin” oo la macne ah Dabargoynta kuwa xadgudbey.